घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू आइवरी कोस्ट फुटबल खेलाडीहरू Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी फुटबल किंवदंती को एक पूरी कहानी र एकाउंटेंट लोकप्रिय नाम उपनाम द्वारा जानिन्छ "Tito". हाम्रो Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यले बचपन समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को एक पूर्ण खाता मा प्रवेश गर्दछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र धेरै टाढा अघि र पिच कम ज्ञात तथ्याङ्कहरू प्रोफाइल, लाइभ कथा समावेश गर्दछ।
Didier Drogba वास्तव मा विश्व भर मा फुटबल प्रशंसकहरु द्वारा प्रशंसा गरिएको छ। धेरै मरे-कडा मेहनतहरूले Didier डोगाबालाई एक बेजोड इच्छाको साथ मात्र फुटबल कथाको रूपमा हेर्छन्, लियोनेल मेसी र सी रोनाल्डोको प्रतिभा भन्दा एक बलियो। यस लेखको मुख्य विषयवस्तुको साथ सुरु हुन्छ।
Didier Didier बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-बाल्यकाल
डेयरियर डोगोबा प्रारम्भिक बचपन
लोकप्रिय 'टिटो' भनिन्छ भनिन्छ 'विशाल'। Didier Drogba मा जन्म XIUMX, 11 मा पूर्ण नाम Didier Yves डोग्रब टेबली संग जन्म भएको थियो। उनको अहिदजान, कोटे डी आइवरमा जन्मिएको थियो। यस संसारमा उनको आगमन दुई आईभरीयन जूनियर बैंकरहरु द्वारा सम्भव भएको थियो जुन 1978 को मध्य मा प्यार भयो।
Didier Drogba आफ्नो युवा दिनहरुमा एक मूल गाँउ मा ठूलो भयो जहाँ कठोर जीवन अवस्था अस्तित्वमा थियो। तिनको प्रारम्भिक जीवनले धेरै भोटेको देखे जुन आफैलाई र परिवारबाट भोग्थ्यो। यो आर्थिक परिस्थितिले हजारौं इभरीयहरू फ्रान्समा हराएको चराको लागि आफ्नो देशबाट भाग्यो। त्यस समयमा फ्रान्स इभोरियन प्रवासका लागि शरणार्थी स्थानको रूपमा देखा पर्यो।
Didier Drogba आफ्नो बचपन उमेर को समयमा कुपोषण संग छोडेका थिए जुन शारीरिक र मानसिक वृद्धि दुवै सीमित छ। तिनको आमाबाबु (अल्बर्ट र क्लोटलेडा डोगाबा) आफ्नो स्थानीय बैंकिंग कार्यहरूसँग संघर्ष गरी मेजमा धेरै खाना खाएनन्। तिनीहरूको लागि मात्र आशा थियो कि फ्रान्सेली आधारित रिश्तेदार र फुटबलर (मिशेल गोबा) द्वारा प्रतिज्ञा गरिएको मोनीको पर्खाइमा। मिशेल गोबा को देशी आइवरी कोस्ट मा कठोरता को कारण फ्रान्स जाने भाग को शुरुवात शुरुआती सेट मा थियो। उनीहरु बाट अपेक्षा गरिएको मोनिज फ्रान्स लाई Didier को यात्रा को सहायता गर्न को लागी थियो जो5को निविदा उमेर मा योजना बनाई थियो।
Didier Drogba को चाचा 'मिशेल गोबा' उनको देशबाट भाग्न पछि फ्रान्सेलीको अवसर पाएको थियो। उनले कम डिभीजन क्लबमा फुटबलरको रूपमा बसेका थिए।स्टेड ब्रेस्टोइस 29 '। त्यस समयमा, फ्रान्सले धेरै कालो शरणार्थी फुटबलरहरूलाई अवशोषित गर्यो।
मिशेल गोबा (Didier Drogba को चाचा)
मसिलाई पठाउँदा त्यहाँ पनि आशा थियो कि मिशेल गोबा (डोगाबाको चाचा) आइवरी तटमा आइपुगी, Didier भ्रमण गर्थे र त्यसपछि, आफूलाई आफैं सँगै फ्रान्समा लैजान्छ। तपाईं, यो आशा छोटो थियो किनकि फ्रान्सले आइवरी कोस्ट भ्रमण गर्ने भिसाको मिशेल गोबालाई इन्कार गर्यो।
यसले तिनलाई मात्र एक व्यक्तिको लागि भिसा प्रक्रिया प्रशोधन गर्न सक्षम पैसाहरू पठाउने मात्र विकल्पलाई छोडिदिए। परिवारको धेरै बहस पछि, यो निर्णय भयो कि सानो Didier फ्रान्समा एक्लै यात्रा गर्नु पर्छ।
एक्लै यात्रा गर्दा Didier को लागि डर थियो। यो गरीब सानो केटा को लागि एक अजीब यात्रा थियो जो एक विमान को सबै उनको जीवन मा नहीं देखा या प्रवेश गरे। आफ्नो प्रस्थानमा एयरपोर्टमा, Didier आमाबाबुले आफ्नो गर्दन मा एक ठूलो लेबल राखे; 'डिआईर ड्रोबगाए मा पेरिस मा माइकल गोबा को भेट'। आदर्श रूपमा, यो ट्यागले सबैलाई हवाईजहाजमा अजीब रूपमा हेर्दै बनाएको छ, यसैले उनीहरूको आमाबाबुले देशबाट बाहिर झिकेर कसरी हानिकारक सोचिरहेका थिए।
डेयरियर डोगाबाले फ्रान्सेमा आइपुगेका थिए सुरक्षित रूपमा आफ्नो चाचा भेट्थे जसले चार्ल्स डे गुलले एयरपोर्टमा उनको लागि धैर्यपूर्वक पर्खिरहेका थिए।
XIUMX उमेर मा फ्रान्स मा Didier डोगाबा को पहिलो आगमन
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-Dयदि फ्रान्समा जीवनको सुरुवात सुरु भयो।
केहि महिनापछि Didier Drogba फ्रान्समा गए, उनको आमाबाबु इवारी कोस्टमा एक संकल्प थियो। उनीहरूको दृष्टिकोण थियो कि उनीहरूको छोराले पूर्णतया अकादमीमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन् र उनको चाचाको रूपमा फुटबल नगर्ने। यद्यपि, गोबाको विचार फरक थियो। उनले डिज्नीको जस्तै पेशेवर फुटबलर बन्न चाहन्थे। मिशेल गोबाले फ्रान्सेलीमा फुटबल अकादमीमा साङ्गीतिक युवा Didier लाई सुविधा दिए।
Didier Drogba मा फुटबल अकादमी (आयु 6)
धेरै समयमा, गोवा र Didier आमाबाबु दुबै बच्चाहरु को भविष्य को निर्धारण मा असहमत। तथापि, अन्तमा एउटा रिजोल्युसन गरिएको थियो। यो सहमति भएको थियो कि Didier Drogba दुवै फुटबल र अकादमीहरू मिश्रण गर्नुपर्छ। Didier Drogba फुटबल अकादमीबाट बाहिर निकाल्न र औपचारिक रूपमा आफ्नो स्कूलको जूनियर फुटबल टोलीमा दर्ता भयो।
यस चरणमा, त्यहाँ दुवै शैक्षिक मिश्रण र सानो फुटबल खेल्ने अवसर थियो।
फ्रान्समा सानो हिज्जे पछि, Didier Drogba अचानक आफ्नो चाचा संग बस्न असक्षम भयो। आदर्श रूपमा, उनी फ्रान्समा आइपुग्नुभन्दा धेरै लामो समय घरपरिवार हुन्थ्यो।
हाल हाल यो बारेमा साक्षात्कार गर्दा, Didier डोगाबाले यसो भन्न खोजे; ...
'मलाई फ्रान्समा मेरो प्रारम्भिक जीवन सम्झन्छु। मैले हरेक दिन रोएँ। किनकी म फ्रान्समा हुन्थे - म कहीं पनि हुन सक्छ - तर किनकि म मेरो आमाबाबुबाट टाढा थिए। मैले उनलाई धेरै सम्झना गरे।
Didier डोगाबाले मात्र उमेरको उमेरमा फ्रान्समा राख्नुभन्दा तीन वर्षसम्म मात्र सीमित भयो। उनी आइभरी कोस्टमा आफ्ना आमाबाबुको साथमा फर्किने इच्छाको बारेमा आफ्नो चाचालाई बोल्दै बोल्दै थिए। उनीहरूले कुनै पनि लामो समयसम्म लड्न सकेनन् भने, Didier का चाचाले उनलाई यो इच्छा दिए। उहाँले मोनी बाहिर ल्याउनुभयो र उनको लागि एउटा फ्लाइट बुक गर्नुभयो। यसले देख्यो Didier डोग्ब्या Abidjan मा आफ्नो आमाबाबु संग घर फर्केर फर्क्यो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-अफ्रिकाका लागि फ्रान्स छोडेर
दुर्भाग्यवश, 8 को उमेर मा Didier डोगाब को आफ्नो घर देश मा फर्किएको राम्रो तरिकाले नहीं गए। इभरी कोस्ट उनको फिर्ती को समयमा आर्थिक पतन को शिखर मा अझै पनि थियो। स्थिति बिन्दुले उसको आमाबाबुले आफ्नो विद्यालय शुल्क तिर्न सक्दैनन्। यसले गर्दा डेयरले आफ्नो शिक्षालाई रोक्न सक्यो। केहि बिंदु मा, Didier Drogba ले स्थानीय स्तर मा फुटबल खेलना शुरू गर्यो। उहाँ साथीहरूसँग प्रशिक्षित गर्न फुटबल नजिकैका क्षेत्रहरूमा जानुभयो। यो 11 थियो जब सम्म उनले तीन वर्षसम्म गरे।
11 उमेरमा, Didier Drogba आमाबाबुले आफ्नो काम गुमाए। यो समय, आइवरी कोस्टको आर्थिक डाउनटाइमको गर्मी अब रोमी हुन सक्दिन।
आफ्नो छोरा फ्रान्स छोड्ने अनुमतिको लागि अफसोस भए, Didier Drogba आमाबाबुले मिशेल गोबालाई फेरि सहयोगको लागि शर्मिला बहिष्कार गरे। केहि समय मा Didier Drogba व्यक्तिगत रूप देखि फ्रान्स छोडने को गलती स्वीकार गरे। सौभाग्य देखि उनको लागि, चाचा मिशेल गोबा ने प्रतिक्रिया दिए र डेयर डोगाब को लागि फ्रान्स मा दोश्रो आना बनाउन को लागि धन पठायो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-दोस्रो फ्रान्समा आउँदैछ
फ्रान्समा आफ्नो दोस्रो आगमनमा, चाचा मिशेल गोबा अझै पनि आफ्नो अध्ययन जारी राख्न आफ्नो आमाबाबुको इच्छाको सम्मान गर्नुभयो। गोबाले स्कूलमा Didier Drogba राखे। उनले उसलाई पनि फुटबलमा आवश्यक एन्टिक्सीलाई सिकाउँथे। शैक्षिक अनुगमनको कारण, डेयरले युवा स्तरमा फुटबल बनाएकी थिइन् जहाँ उनले सही पछाडि खेले। उनको चाचा मिशेल गोबाले उनलाई 1993 मा युवा फुटबल क्लब 'लेभेलिस एसपी' संग जोडेको छ। उनी डेरििएर डोग्बाको फुटबल पेपरमा काम गर्न थालेका थिए।
डिडिएर ड्रोग्बाको फुटबल कागज कार्य (उमेर १)) डिडियर ड्रोग्बा युवा फुटबल ली मान्समा
यसियर नेयर डोगाबाले उच्च विद्यालयमा अध्ययन गर्दा भाग-समय फुटबलमा केन्द्रित गरे। उच्च माध्यमिक शिक्षा पछि, तिनी ए ए डिग्री मा पछि लागेccounting माइन विश्वविद्यालयमा। एकै समयमा, उनले फुटबलसँग ली मान मा आफ्नो शिक्षा संयुक्त।
फुटबल पूर्ण-समय लिनु अघि डियरियर डोगबोबाले आफ्नो एकाउन्ट्ट डिग्रीको फाइनलमा मन पराएका थिए।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-एक प्रमाणित चार्टर्ड एकाउन्टेंट
Didier डोगाबा उनी आफ्नो शिक्षाको साथ नगरेसम्म एक पेशेवर फुटबलर हुन चाहँदैनन्। आदर्श रूप मा, Didier डोगाब 21 को उमेर मा लेखांकन डिग्री ले गयो। आज एक दर्ता गरिएको लिस्ट एकाउन्टेंट्ट हो।
Didier Drogba: एक प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट
आफ्नो लेखांकन डिग्री पछि 21 को उमेर मा, Didier फुटबल मा पुरा तरिकाले फोकस गर्ने निर्णय गरे। पहिलो उनले भूमिकामाथि आक्रमण गर्ने क्षमतामा काम गरे। यसले तिनलाई दायाँ पछाडि अगाडी फर्वार्ड गर्यो। त्यस समयमा, त्यहाँ धेरै खेलाडीहरू भन्दा धेरै प्रतिभाशाली थिए। तिनीहरू शुद्ध प्रतिभा थियो। हे, Didier डोगाबाको इच्छा उनीहरूको प्रतिभा भन्दा बलियो थियो।
तिनको मेहनतले उनलाई 2002 मा गुआङ्पाम्पको स्थानान्तरण गरेको थियो, जहाँ उनले क्लबलाई दोस्रो विभाजनमा रेजिजनबाट बचाउन मद्दत गरे। यो प्रशोधन पनि उनलाई 2003-04 सिजनको लागि मार्सिले मा पठाइएको छ, जहाँ उनले 19 लक्ष्यहरु लाई फाइनान्सियन लिग्यु 35 प्लेयर को वर्ष जीतने को लागि 1 खेलहरु मा बनाए। आफ्नो एथलेटिक प्रधानमा पुग्न, 26-वर्ष पुरानो युरोपको शीर्ष क्लबहरूको धेरै लक्षित गरियो, र चेल्साले 36 मा आफ्नो सेवाका लागि लगभग $ 2004 मिलियनको ट्रांसफर शुल्क भुक्तानी गरे। बाँकी इतिहास हो!
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-फुटबल ड्रीमहरूमा उल्लेखनीय अभिभावक समर्थन
Didier डोगाब धेरै मायालु र समर्थन गरेको उनको आमा, क्लोट्लेड ड्रगोबा र पिता, अल्बर्ट डोगबोबाले। दुर्भाग्यवश, तिनीहरूले कहिल्यै अफगानिस्तानमा फुटबलमा जान नसक्ने समर्थन गरेनन्। डोगाब, तपाईले लेखा सेवा प्राप्त गरेर उनीहरूको इच्छाको सम्मान गर्थे र तिनीहरूलाई गलत साबित गर्यो। उनले विश्वास गरे कि फुटबलले उनीहरुलाई अझ धेरै सफलता ल्याउन सक्छ किनकि यो भएको छ। आज, उनीहरूले उनको सफलताको फाइदा पाउँछन्। ती दिनहरू मिशेल गोबाले धेरै कुरा सुन्नेछन्।
Didier Drogba आमाबाबु
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-अधिकृत अफ्रिकी फुटबलर
Didier Drogba को सबै भन्दा अफ्रीका द्वारा प्रेम गरिएको छ किनकी उनले 2002 मा आयोरी कोस्ट टीम को लागि आफ्नो पहिलो अन्तरराष्ट्रीय उपस्थिति बनाए। धेरै फुटबल पन्डितहरुको लागि, Didier Drogba को सबै भन्दा धेरै सजाय अफ्रीकी फुटबलर छ। 'चेल्सी एफसी' को लागी धन्यवाद। उनी दुई वर्ष अफ्रिकी फुटबलरलाई नाम दिइएको छ (2006 र 2009)। उनी आफ्नो राष्ट्रिय टोली बिलाउने जिम्मेदार थिए, उपनाम दिए "हात्ती," 2006 मा पहिलो पल्ट विश्व कप प्रतियोगितामा, र फेरि 2010 मा। यद्यपि हाइफिस्टले दुवै पटक समूह चरण अघि बढ्न सकेन। तपाईंले फुटबलको सबैभन्दा ठूलो टूर्नामेंटमा उनीहरूको उपस्थिति अफ्रीकाबाट आफ्ना समर्पित प्रशंसकहरूलाई रोमाञ्चक बनायो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-सिभिल युद्ध रोक्दै
डेयरियर डोगबोबालाई अक्सर भनिन्छ 'शान्तिको चैंपियन ' साथीहरु र प्रशंसकहरु द्वारा। आफ्नो देशको मान्छेलाई के गर्न रोक्ने उनको क्षमतालाई सैनिक युद्ध भनिन्छ भन्ने कुरामा कुनै संदेह छैन कि उनको बीचमा नाम '100 संसारको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्ति' समय पत्रिका द्वारा। आफ्नो गृह देशमा एक धेरै लोकप्रिय व्यक्तिको रुपमा, उहाँले आफ्नो देश नागरिक युद्धको पछाडि हुँदा हुँदा उहाँले राम्रो उद्देश्यहरूका लागि आफ्नो खण्ड प्रयोग गर्नुभएको छ।
यो वास्तवमा के भयो?
जस्तै आईवरी कोस्टले 2006 मा गृहयुद्धबाट भोग्नु भएको थियो, डेयर डोगाबाले विश्व कप क्वालीफाइज खेल पछि शान्तिको लागि प्रार्थनामा हात्तीहरूको नेतृत्व गरे। उनले युद्धको अन्त्यमा एक टोलीको बयानलाई अझ बढी व्यवस्थित गरे। यो प्रयास देशको सशस्त्र समूहहरू बीचको आगो आगो लिन मद्दतमा श्रेय गरिएको थियो।
यस कदमले आफ्नो देशको सबै उत्प्रेरित सांस्कृतिक नेताहरूलाई तुरुन्त शान्ति ल्यायो। अन्तमा, एक पोस्ट-सिभिल युद्ध जसले हजारौंको जीवन लिनु परेको थियो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-अफ्रिकी मार्ग गाँउ
युरोपेली देशहरूमा आफ्नो अधिकांश जीवन बिताउने बावजूद, उनी अफ्रिकी संस्कृतिबाट कहिल्यै विनाश गर्दैनन्। यसमा एक नयाँ गन्तव्यमा पुग्दा कहिलेकाहीँ उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो देश सङ्गीतलाई अनिवार्य गीतको रूपमा गाईन्छ।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-चेल्सी एफसी महिला पत्रकारितालाई आकर्षण
डियरियर डोगाबाको लागि मजेदार आनन्दको आनन्द हो। यस विशेष चेल्सी महिला महिला पत्रकारको वरिपरि फ्लाइङलाई प्रशंसकहरूको लागि नयाँ थिएन। हे, उनी कहिल्यै राम्रो टिप्पणी गर्न रोक्दैनन्।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-जादू प्रणाली संग संलग्न
पहिलो विश्व कपको अघि, आइवरी कोस्ट टोलीले जादू प्रणाली स्थानीय बांडको साथ एक रेकर्डिङ गर्यो। यहाँ, Didier डोग्रबले संसारलाई साबित गर्यो कि उनी गाई र प्ले फुटाउन सक्छन्।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-राष्ट्रिय टोली नेता
डेयर डगबाको राष्ट्रिय टोली साथीहरूलाई साँच्चै थाहा छ कि एकताबद्धता भनेको हो। तिनीहरूको प्रकृति अनूठा छ र अन्य अफ्रिकी राष्ट्रिय टोलीहरूको तुलनामा हुन सक्दैन। तिनीहरू एकसाथ तर्क गर्छन् र वास्तविक भाइहरू जस्तै काम गर्छन्। Didier Drogba जसले स्वाभाविक रूपमा राजाको रूपमा देखाएको छ सधैँ सबै कामको केन्द्रमा।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-थियरिरी हेनरीसँग साक्षात्कार
कुन डियरियर डोगाबाले खेल्ने खेल खेल्दै र अफ्रिकामा खेलिरहेका अनुभवहरूको बारेमा बताउनु पर्छ। तल हेर्नुहोस्;
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-बरफ बाल्टी चैलेंज
Didier Drogba बर्फ बाल्टी चुनौतीलाई प्रेम गर्दछ। उहाँले अनुसन्धान दान र 'एियोट्रोफिकिक पार्श्व sclerosis' रोग को जागरूकता को बढावा दिन को लागि गर्दछ। तल हेर्नुहोस्;
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-राष्ट्रिय टीमको लागि सुपर माम कुकहरू
Didier Drogba को अझै पनि धेरै देखिन्छ 'जवान र सुपर'। कोटे डी आइवरको आमा अन्तर्राष्ट्रिय टोली र उनीहरूको समर्थकहरूका लागि पकाउने दलहरूको एक टोली हो।
क्लोटलेड डोगाबाले सेम, काली मिर्च, सेतो चावल र स्टवको पारंपरिक घर पाउने गर्दछ। उनको अनुसार, 'म आफ्नो देशमा राष्ट्रिय टोलीका समर्थकहरू र खेलाडीहरू निशुल्क मुक्त गरेर योगदान गर्न चाहन्छु। मेरो खानाले समर्थकहरूलाई विजयी हुन हाम्रो टीमलाई खुशी पार्न दिन्छ।
हरेक म्याच दिन, स्याटफाटका समर्थकहरूले खाली कटोराको साथमा सबै भन्दा प्रभावकारी आईभोरियन खेलाडीको मासुबाट निस्कने खाना निस्कनका लागि लामखुट्टेको साथ लिईन्।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-अङ्गको स्वाद
राजनयिक होने को बावजूद, Didier Drogba पागल पनि हुन सक्छ। तलका भिडियोले एक क्षण प्रकट गर्छ कि उसले आफ्नो सुन्दर गुमायो। जस्तै Didier डोगाबाले यसो भन्छ, "यो मात्र हुन सक्छ जब मेरो भावना वा मेरी टीम धोखा दिइयो".
उनले बारम्बार बार्सिलोनासँग च्याम्पियन लीग विघटन पछि रेफरी टम हेनन ओभरेबोमा औंलालाई संकेत गरे। यो तलवार प्रस्तुत को रूप मा दिखाया Didier Drogba वास्तव मा पागल जान्छ।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-मित्रको लागि पारिवारिक समस्या समाधान गर्दै
उनले एक पटक सल्लाह दिए र उनको परेशान टोगोलिस मित्र 'इमानमानुएल एडबेयभर' लाई उनको परिवारको मुद्दा सुल्झन मद्दत गरे।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-गिटार सिक्दै।
क्रिस कोहेन Didier को गिटार को उपयोग कसरि गर्छन र उनको गाना बजाउने छ कि प्रशंसकों को म्याच को समयमा मांसपेशिहरु को सिकाता छ, र फेरि उनको साथ एक जंगल मा जोडता छ। तल हेर्नुहोस्;
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-प्रेम जीवन
हो, मानिसहरूको अपेक्षाहरूको तल जाँदै थिएयर डोगाबाले आफ्नो देश कोट डी आइवरबाट एक महिलाको बसोबास गरे। तिनी हाल मालिटी लाल्ला, एक मलेरिया आइतवारसँग विवाह गरेको छ जसमा उनले पेरिसमा भेटेका थिए र युगलसँग तीन जना बच्चाहरू सँगै छन्।
तल डियरियर डोग्बाको परम्परागत विवाहको फोटो हो जुन एबिजजानमा गरियो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-यो बच्चाहरु
तल योहाक डोगाबा (डेयरियरको पहिलो छोरो) र इमान डोग्बा (डेयरको पहिलो र एक्लो छोरी)। ईसाक डोगाबाले चेल्सीका लागि 14 हरूको लागि खेलेको छ। उनको सबैभन्दा ठूलो पुत्र, इसहाक, 1999 मा फ्रान्समा जन्मिएको थियो, तर इङ्गल्याण्डमा हुर्के र चेल्सी अकादमी प्रणालीमा खेलेको छ।
Didier Drogba सँग पनि पछिल्लो कायर डोगाबा भनिन्छ। उहाँ 2010 मा जन्मनुभएको थियो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-इसहाक डोगाबा संग सम्बन्ध
Didier साँच्चै आफ्नो छोरा मनाउन मनपर्छ। इसाक (माथि चित्रण गरिएको) यो लेख लेख्ने समय 17 वर्ष पुरानो हो। Didier डोगाबका छोरा इजकले चेल्सी मा पिताको पादरीमा पछ्याउन चाहन्छ तर तर इङ्गल्याण्ड को प्रतिनिधित्व गर्ने योजना छैन र आइवरी कोस्ट होइन। उहाँले फ्रान्सलाई पनि छोडे।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-परिवारसँग बिताउने समय
डिडिएर डोगाबा उनको लक्जरी नौकामा छुट्टी यात्राहरूको लागि आफ्नी श्रीमती र बच्चाहरू लिन मन लाग्छ। सेलिब्रिटी फुटबलर एक खेल टी-शर्ट मा देखियो माइक माइक टिसन को सामने एक तस्वीर को रूप मा उनले एक दिन बाहिर St St Tropez परिवार.
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-राहन्नासँग भेटघाट गर्ने अफवाह
एकेडेड डोगाबा एक पटक पटक्कै हेर्दै र रिहन्नासँग मिलेर भाग लिइयो। यो चेल्सी च्याम्पियन्स लीग विजय पछि थियो।
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-Die Die Hard Footballer।
वास्तवमा, Didier डोगाबा जीवन बिताउन तयार भयो, लड्न र चेल्सी एफसीको लागि मर्नु भयो। उहाँ एक साँचो चेल्सा लीजेंन्ड आउँछिन्, सूर्य आउनुहोस्। हामी तपाईंसँग एक को एक 'मिर हार्ड'क्षण
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-फ्रैंक लैंम्पर्डसँग सम्बन्ध
Didier Drogba ले सधैं फ्रान्कल लम्पर्ड को लागि आफ्नो प्रेम व्यक्त गरेको छ। नियमित अवसरोंमा, प्रायजसो उत्सवको समयमा, उहाँ गायनको सामान्य आदत बनाउनुहुन्छ 'सुपर फ्रैंक' गीत चेलस प्रशंसकहरू। यो एक दिन भयो जुन उनीहरूको चैंपियन्स लीगको ट्रफी घर ल्याइयो। दुबै मित्रहरू वास्तवमा, खर्चयोग्य छन्। तल हेर्नुहोस्;
Didier Drogba बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-रोमन एब्रामोविचसँग सम्बन्ध
Didier Drobga साँच्चै रोमन अब्राहमोभोविक (चेल्सी एफसी मालिक) संग एक बलियो सम्बन्ध छ।
यो छ लाइफबोगरको Didier Drogba को लोकप्रियता सूचकांक।
लाइयर बोगगर द्वारा Didier Drogba लोकप्रियता सूचकांक
तिमी पनि चेल्सी मा उनको समय देख्यो, उनको लक्ष्य को सम्झनाहरु सदाको लागि समाप्त हुनेछ।
Fonkem primus Antepioh9मे, 20179मा: 13 अपरान्ह
शानदार, म वास्तव मा प्रभावित हूँ। मैले सधैं मानिसलाई माया गर्थे र त्यसोभए त्यसोभए त्यसो गर्दा विशेष गरी आफ्नो युद्ध सम्बन्धी युद्धलाई नष्ट गर्न सहयोग पुर्याउन जारी रहन्छु जुन आत्माले भोग्नु पर्छ। परमेश्वरले उसलाई डोऱ्याउन जारी राख्नुभयो।